Mkpokọta X5: Mee, Weputa ma melite Saiti si na Desktọpụ | Martech Zone
Abụ m onye na-akwado usoro njikwa ọdịnaya n'ịntanetị, mana enwere oge mgbe ọ dị anyị mkpa ịnweta saịtị na-agba ọsọ. Hazi CMS, ichota ya, ijikwa ndị ọrụ, wee rụọ ọrụ na nchịkọta akụkọ ma ọ bụ ndebiri ederede chọrọ nhazi ga-eme ka ọ ghara ịga n'ihu na-aga n'ihu mgbe ị nwere mkpa dị ngwa iji nweta saịtị ma na-agba ọsọ.
Tinye X5 webusaiti, Windows ™ desktọọpụ mbipụta ngwá ọrụ ị nwere ike iji wuo, idokwa na melite weebụsaịtị. Ọ bụghị onye editọ - ọ bụ interface njikwa niile yana ọba akwụkwọ ndebiri, ọba foto foto, na dọrọ na dobe editọ niile na ngwugwu dị mma. Ọbụghị naanị nke ahụ, ndebiri na interface na-enye ohere maka ịmebe ngwa ngwa ka ị nwee ike ịhụ etu saịtị gị ga-esi na ngwaọrụ ọ bụla.
Ihe ntanetị WebSite X5 na-agụnye veranda foto, ụdị email, peeji nke echedoro paswọọdụ, ọkọlọtọ, ecommerce, blọọgụ, netwọkụ mmekọrịta, yana ọtụtụ nhazi na ọba akwụkwọ ndị ọzọ iji wuo ụdị saịtị ọ bụla. Otu ikikere na-enye gị ohere ibudata ngwanrọ na desktọọpụ abụọ ma wuo ọtụtụ saịtị ịchọrọ - enweghị ike.
WebSite X5 Atụmatụ
Mfe iji desktọọpụ interface
Foto 400,000 enweghị ụgwọ eze
Ngwaọrụ ndị ọkachamara (ụdị email, mpaghara echekwara, ijikọ na db, azụmahịa, wdg)
Ọnwa 12 nke gụnyere web hosting
Nkwado asụsụ raara onwe ya nye
Na-achọ Windows ™ Vista, 7, 8, ma ọ bụ 10
Enwere ngwaọrụ a kapịrị ọnụ maka ọrụ ọ bụla, site na ịdezi onyonyo na foto, na ịmepụta bọtịnụ, na -emepụta menu, na-akpaghị aka iji ịntanetị na igwe FTP arụnyere.
Gbalịa mkpokọta X5 n'efu!
Ngosipụta: Nke a bụ mkpọsa Buzzoole na anyị na-eji njikọ nsuso anyị na post.
Tags: desktọọpụngwa desktọọpụdesktọọpụ website na-ewuftpwebụsaịtị x5Mkpo5
Google na-ebupụta nghọta ppingzụ ahịa… ọ dịkwa egwu!